ဝိပဿနာရှူနည်းများလေ့လာနိုင်ရန်.. - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှု= Sep 20, 2015
၁။ သစ္စာလေးပါးဆိုတာ သမုဒယသစ္စာ၊ ဒုက္ခသစ္စာ၊ မဂ္ဂသစ္စာ၊ နိရောဓသစ္စာ။
၂။ ရခဲတဲ့ ဘ၀လေးမှာ အလကား အချိန်တွေ မဖြုန်းပါနဲ့။
၃။ နားကတရားနာပါ၊ ဥာဏ်က ခန္ဓာလှည့်ပါ။
၄။ တရားနာတာသည် မိမိအရေး၊ တရားအားထုတ်တာသည် မိမိအရေး။
၅။ နားကြီးကြီးနဲ့ တရားနာပါ။
၆။ ၀ိပဿနာ အားထုတ်တဲ့အခါမှာ ကိလေသာ ကြားမခိုစေနဲ့။
၇။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆိုတာ စာထဲမှာ ရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ မိမိခန္ဓာထဲမှာ ရှိတဲ့တရား။
၈။ မိမိ ခန္ဓာထဲမှာ ရှိတဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ကို မိမိဥာဏ်နဲ့ ရှင်းအောင် လုပ်ပါ။
၉။ စာ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သိတာသည် သညာသိ၊ ခန္ဓာ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သိတာသည် ပညာသိ။
၁၀။ ရှေ့အသေကို နောက်အနေနဲ့ ရှုတာ ၀ိပဿနာ။
၁၁။ သညာသိနဲ့ နိဗ္ဗာန် မရောက်နိုင်ပါ၊ ပညာသိမှ နိဗ္ဗာန် ရောက်မည်။
၁၂။ ရှေ့နောက် ခွဲတတ်ပါစေ၊ မိမိအရေးက ရှေ့ထား၊ သားရေး သမီးရေး စီးပွားရေးက နောက်ထား။
၁၃။ ဘ၀ကူးကောင်းအောင် မလုပ်ပါနဲ့၊ ဘ၀ချုပ်ငြိမ်း ရုပ်သိမ်းအောင် လုပ်ပါ။
၁၄။ ဒါနက သံသရာ ရှည်တာလား၊ ဒါနနောက်က အသိမလိုက်လို့ သံသရာရှည်တာလား။
၁၅။ ဒါနနောက်က အသိမလိုက်လို့ သံသရာရှည်တာပါ။
၁၆။ သစ္စာသိလျှင် ခန္ဓာရောင်းလှူပါ။ သစ္စာမသိလျှင် သစ္စာသိအောင် အရင်လုပ်ပါအုံး။
၁၇။ အိုရာက နာရာမရောက်ခင် ၀ိပဿနာ လုပ်ပါ။
၁၈။ အရှိနဲ့ အသိ ကိုက်အောင်လုပ်တာ ၀ိပဿနာ။
၁၉။ ရှေ့စိတ်ကို နောက်စိတ်နဲ့ ရှုတာ ၀ိပဿနာ။
၂၀။ ရှေ့နာမ်ကို နောက်ဥာဏ်နဲ့ ရှုတာ ၀ိပဿနာ။
၂၁။ ၀ိပဿနာ အားမထုတ်ပဲနဲ့ နေ့ရွှေ့ ရက်ရွှေ့ ရွှေ့နေတာသည် ဥာဏ်ကမဦးဘဲ အသေကဦးသွားရင် ကိုယ့်အတွက် နာမယ်။
၂၂။ အသေက ဖြစ်ပျက် အရှင်က မဂ်၊ အပျက်နဲ့ မဂ်နဲ့ ကိုက်အောင် ရှုတာ ၀ိပဿနာ။
၂၃။ ရှေ့ကဖြစ်ပျက် နောက်ကမဂ်နဲ့ ကိုက်အောင်ရှုတာ ၀ိပဿနာ။
၂၄။ အသေကို အရှင်က ကြည့်နေတာ ၀ိပဿနာ ဖြစ်သည်။
၂၅။ အသေက ဖြစ်ပျက် အရှင်ကမဂ် အပျက်နဲ့ မဂ် ကိုက်အောင် ကြည့်တာ ၀ိပဿနာ။
၂၆။ သူများစိတ် အကဲမခတ်နှင့်၊ မှားသော်ရှိ မှန်သော်ရှိ၊ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် အကဲခတ်တာမှ အမှန်ရမည်။
၂၇။ အလုပ်ကြည့်ချင်ရင် ခန္ဓာကြည့်၊ အလုပ်စဉ်ကြည့်ချင်ရင် မှတ်တမ်းကြည့်။
၂၈။ ကိုယ့်စိတ်ဖြစ်တာ ကိုယ်မသိတာ အရုပ်အဆိုးဆုံး။
၂၉။ ကိုယ့်စိတ်ဖြစ်တာ ကိုယ်အကဲခတ်နိုင်မှ ၀ိပဿနာ။
၃၀။ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ မွေးကတည်းက အသေဘက်ကို ပြေးနေတယ်။
၃၁။ ဘယ်ဗေဒင်မှ မယုံကြနဲ့၊ ခန္ဓာ သူ့လမ်းသူ ပြေးနေတော့ မနေ့ကထက် ယနေ့ သေဘို့ တစ်ရက်နီးသွားပြီ ဆိုတာသာ ယုံလိုက်ပါ။
၃၂။ ခန္ဓာ၏ ၀တ္တရားက အသေရှာတာ၊ ဥာဏ်၏၀တ္တရားက အသေရှောင်တာ။
၃၃။ ခန္ဓာက အပြေးသွားနေတော့ အသေကဦး၍ ဥာဏ်က နောက်ကျ သွားလိမ့်မယ်။
၃၄။ အပြေးမရပ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် သုဿာန်မရောက်ခင် မဂ္ဂင်အလုပ် မြန်မြန် လုပ်ပါ။
၃၅။ အသက်တမ်း ခပ်တိုတိုလေးမှာ ခပ်ခိုခိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင် အသေစောသွားလျှင် ကိုယ်ကျိုးနည်းလိမ့်မယ်။
၃၆။ သာသနာနဲ့ကြုံမှ သစ္စာလေးပါး ထွက်မြောက်ရေးတရား ပေါ်တယ်။
၃၇။ ကိစ္စဟူသ၍သည် မဂ်တား ဖိုလ်တားလို့ မှတ်ပါ။
၃၈။ ဒကာ ဒကာမတွေဟာ တဏှာ (လောဘ) ခိုင်းရာကို ကျွန်သဘောက် ပီပီ လုပ်နေကြတယ်။
၃၉။ တဏှာကို အဖော်မလုပ်နဲ့၊ ဥာဏ်ကို အဖော်လုပ်ပါ။
၄၀။ အလကားနေသ၍ အအားနေသ၍ အမှားနေခြင်းသာလို့ မှတ်ပါ။
၄၁။ ဆွေနှင့် မျိုးနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနှင့် မသိပြုံးပြုံးနေသလောက် သေခါနီးမှာမျက်ရည်ကျရပါလိမ့်မယ်။
၄၂။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သနားရင် ၀ိပဿနာ လုပ်ကြ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မသနားရင် သားရေး သမီးရေး စီးပွားရေး လုပ်ကြ။
၄၃။ အသက်ကြီး လေလေ ကံမွဲ ဥာဏ်မွဲလေလေမှတ်၊ ကံမွဲတာ အရေးမကြီး၊ ဥာဏ်မွဲရင် နိဗ္ဗာန် မရောက်။
၄၄။ ကံကို ဥာဏ်ကဖြတ်မှ နိဗ္ဗာန်ရမှာ၊ ဥာဏ်မပါရင် ကံက ချယ်လှယ်သွားလိမ့်မယ်။
၄၅။ နိဗ္ဗာန်သည် ကံ၏အကျိုးမဟုတ်၊ ဥာဏ်၏အကျိုးဖြစ်တယ်။
၄၆။ လူပြော သူပြောတွေကို မယုံနဲ့၊ မိမိခန္ဓာက ပြောတာကိုသာ ယုံကြည်။
၄၇။ ခန္ဓာကြီးရဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိ ပင်ကိုယ်သဘောက ဖြစ်မှု ပျက်မှုဘဲရှိတယ်။
၄၈။ ၀ိပဿနာဆိုတာ ခန္ဓာ မလိုချင်အောင် လုပ်တာ။
၄၉။ ဒါနနဲ့သီလသည် ကိလေသာရောဂါ သက်သာရုံရမယ်။ ၀ိပဿနာ အလုပ်ပါ လုပ်မှသာ ရောဂါ ပျောက်မယ်။
၅၀။ အလုပ်တရားဆိုတာ ခန္ဓာအရှိနဲ့ ဥာဏ်အသိ ကိုက်အောင်လုပ်ပါ။
၅၁။ ခန္ဓာနဲ့ ငါနဲ့ မရောပါနဲ့။
၅၂။ တရားနာတယ်ဆိုတာ ဒီအချိန်မှာ မတရားအလုပ် မလုပ်တဲ့ အချိန်ပဲ။
၅၃။ ကြားတဲ့တရားနဲ့ သိတဲ့တရား နှစ်ခုထပ်ရင် သောတာပန် တည်နိုင်တယ်။
၅၄။ ယခုအချိန်ဟာ အားလုံး အဖက်ဖက်မှ ကြုံပြီး ကျွတ်တန်းဝင်ရမဲ့ အချိန်ဘဲလို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး အလုပ်သာလုပ်ပါ။
၅၅။ ယခုအဖက်ဖက်မှ ကြုံဆုံတဲ့ ကာလကလေးသည် အိုဘေး၊ နာဘေး၊ သေဘေးတွေကို တားနိုင်တဲ့ကာလ၊ ဒီအဘိုးတန်မှတဲ့ ကာလလေးကို သားရေး သမီးရေး စီးပွားရေးတွေနဲ့ချည်း အချိန်မကုန်လွန်ပါစေနှင့်။
၅၆။ တဏှာ (လောဘ) ခိုင်းတိုင်း လုပ်တာသည် အရှက်မရှိလို့။
၅၇။ တဏှာ (လောဘ)ခိုင်းတိုင်း လုပ်လို့ သေလျှင် အပါယ်လေးပါး ရောက်မယ် ဆိုတာလဲကြောက်။
၅၈။ အ၀ိဇ္ဇာ တဏှာ ကိန်းလာရင် ဟိရိသြတ္တပ္ပ (အရှက် အကြောက်) မရှိတော့ဘူး။
၅၉။ သားရေး သမီးရေး အတွက်သာ ဂရုစိုက်လုပ်နေရင် အချိန်အလွဲသုံးစားလုပ်တာဘဲ၊ လူမိုက်အချိန်ဘဲ ဆိုတာ မှတ်လိုက်။
၆၀။ သစ္စာတရားကို နာ၊ ဥာာဏ်က ခန္ဓာကိုလှည့်၊ ပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာ နောက်က ၀ိပဿနာ ဥာဏ်မလိုက်ရင် ဒုက္ခသစ္စာ လိုက်မှာဘဲ။
၆၁။ ခန္ဓာကလောင်စာ (ထင်း)၊ ဇရာ မရဏက (မီး)၊ သံသရာတလျှောက်လုံးမှာ ဘယ်ခန္ဓာရရ လောင်စာနှင့်မီးတွဲနေတာပဲ ရှိတယ်။
၆၂။ လောင်စာသိမ်းပြီး မီးငြိမ်းတာသည် နိဗ္ဗာန်။
၆၃။ လောင်စာသိမ်းပြီး မီးငြိမ်းတဲ့ အလုပ်သည် မဂ္ဂင် အလုပ်ပဲ။
၆၄။ ဒုက္ခသစ္စာကို ပိုင်းခြားသိတာလဲ မဂ်ပဲ၊ သမုဒယသစ္စာ သတ်တာလဲ မဂ်ပဲ၊ နိရောဓ သစ္စာ ရောက်အောင်လဲ မဂ်ပဲ၊ ဒါကြောင့် မဂ်သည် သုံးကိစ္စ ရွက်ဆောင်တယ်။
၆၅။ အာရုဏ်တက်တာသည် နေထွက်ဖို့ ရှေ့ပြေး၊ ၀ိပဿနာမဂ်သည် လောကုတ္တရာမဂ်၏ ရှေ့ပြေး။
၆၆။ ဒါနက သံသရာမလည်၊ အသိမလိုက်လို့ သံသရာ လည်တာမှတ်ပါ၊ သစ္စာ သိပြီးလှူရင် ခန္ဓာကိုယ်ရောင်းလှူပါ။
စတင်ရေးသားခဲ့သူ soesoetinmyint. ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးချက် မှာ ကိုလှခိူ Jul 15, 2014. 11 Replies0Likes
သမီးနာမည်က စိုးစိုးတင်မြင့်ပါ .....ဝိပဿနာအလုပ်ကိုအရမ်းစိတ်ဝင်စားလို့ပါ ....ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်သေချာနားမလည်သလိုဖြစ်နေလို့ပါရှင် .....ဝိပဿနာတရားတွေကိုတော့ နာဖြစ်ပါတယ် ....တရားစခန်းလဲ…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
စတင်ရေးသားခဲ့သူ တင်အေးနိုင်. ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးချက် မှာ ကိုကျော်သန်း Jan 26, 2013. 11 Replies 1 Like
စတင်ရေးသားခဲ့သူ နီစံ (အနီ). ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးချက် မှာ U Chit မေ 29, 2012.3Replies3Likes
Dhamma Web www.dhammaweb.net မှ တဆင့် ပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ဓမ္မဖိုရမ်တွင် ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နှင့် သမထ၊ ၀ိပဿနာ အကြောင်း ဆွေးနွေးရာမှ ဖတ်ရှုလေ့လာမိသမျှကို…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
မူလနှစ်ဖြာ ဆောင်ပုဒ် နည်းနာ
စတင်ရေးသားခဲ့သူ နီစံ (အနီ). ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးချက် မှာ 0rotmcd6qjael Jan 25, 2012. 1 Reply0Likes
၀ိပဿနာရှူနည်းများလေ့လာနိုင်ရန်.. သို့အဖွဲ့ဝင်ပြီးမှ မှတ်ချက်များကိုရေးသားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
hla moe 24 သည် ဇန်န၀ါရီ 2, 2012 က 7:13pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
မျိုးနိုင် သည် ဇန်န၀ါရီ 2, 2012 က 6:48pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာမှန်သမျှ လွယ်လွယ်မရနိုင်ပါ။ အဲဒါကြောင့် တန်ဖိုးကြီးလွန်းတဲ့ တရားအသိကို လွယ်လွယ်နဲ မရနိုင်တာပါ လူပေါင်းများစွာထဲကမှ တရားအားထုတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ အသိတရားဟာတန်ဖိုးအရမ်းကိုကြီးမားပါတယ် အဲဒါကြေင့် ရရှိတဲ့လူဘ၀လေးအလကားမဖြစ်အောင်
ကြိုးစားရမယ်။ စီးပွားရေးကိုလုပ်တုန်းကနေပူမရှောင်မိုးရွာမရှောင် ဇွဲစိတ်သန်သန် လုပ်ဆောင်နေတယ် တရားအလုပ်ကြမှ ရော့တိရောရဲ လုပ်မယ်ဆိုရင် ထင်သလောက် ခရီးမရောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ် အားကုန်ကို ထုတ်သုံးရပါမယ် ဘုရားက ပထ၀ီတေဇောအာပေါ ၀ါယောဆိုတဲ့သေမင်း မြွေကြီးလက်ကလွတ်မြောက်ချင်ရင် ဖနောင့်နဲ့တင်ပါးတသားထဲကျအောင်ပြေးပါဆိုတာ
တရားအားထုတ်တဲ့လူတွေကို မီးကုန်ယမ်းကုန် အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ပါလို့ပြောတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
ကျော်ကို သည် ဒီဇင်ဘာ 30, 2011 က 1:11pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ကျနော် ကိုဒီအလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်လာအောင်တွန်းပို့ တာကတော့ ကျနော့ အသိုင်းဝိုင်းပါပဲ..။
မောင်နမတွေစိတ်ဝမ်းကွဲလာတယ်၊တစ်ချို့ ကျကနော်လက်ပေါ်မှာချို့ တဲ့ စွာနဲ့ သေပွဲဝင်တယ် အမေအပါဝင်ပေါ့ ချမ်းသာသွားသူတွေကအဆင့် တန်းခွဲတယ်အဖွား(ဆရာလေး)၇ဲ့ နာရေးကိုတောင်အကူငွေလေးပဲလှမ်းထည့် တယ်....အဖွားနာရေးမှာ မီးင်္သဂြိုလ်တဲ့ နေ့ ကလမ်းတစ်လျှောက်လုံးကျနော်ငိုမိတယ် တစ်ကောင်ကြွက်လိုပါပဲ.(.အဲ့ ဒီအချိန် ကိုမျိုးနိုင်တစ်ယောက်ကျနော့ ကိုအစွမ်းကုန်ကူညီအားပေးခဲ့ ပါတယ်...)ကြီးစွာသောဆုံးရှုံးမှုတွေရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မှန်ကန်သောစိတ်ထွက်ပေါက်ဆီကို ကိုမျိုးနိုင်၇ဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ဆိုမှုကြောင့် ဒီလောကထဲရောက်ခဲ့ တာပါဗျာ...ဒီအလုပ်တွေမလုပ်ခင်ကျနော်ဟာ အရက်သမား ၊ဆေးသမား ဖြစ်ခဲ့ ဖူးပါတယ် ဒီမကောင်းမှုတွေကိုစွန်လွှတ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ ..၀ိပဿနာအားထုတ်မှပဲ အကုန်ပြတ်ပါတယ်လို့ .....
hla moe 24 သည် နိုဝင်ဘာ 26, 2011 က 12:59pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
လူတသိန်း နတ်တသိန်း သေတာတောင် တစ်ယောက် ပြန်တက်မလာဘူးတဲ့ ဘုရားဟောပါ ကြောက်စရာ
ကောင်းတယ်နော်...အဲ့ဒီစက်ဝိုင်းကနေထွက် ဖို့ ဝိပသနာနည်းဘဲးရှိပါတယ် ..ဘုရားရှင်တွေ့ ရှိခဲ့တာနော်.
ဘုရားတောင်ဥဒန်း ကျုးခဲ့တာ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း အနေကဇာတိသံ သာရံ ..ဒါကိုရည်စူပြီး အနေကဇာတင်တာ ဖြစ်ပေါလာကြောင်း ဦရွေအောင်စာ အုပ်မှာဖတ် ဖူးပါတယ်...
ဒါကြောင့်ဝိပသနာကို လေ့ကျင့်ဘို့ လိုပါတယ်.လေ့ကျင့်ဘို့ အတွက် အသိမှန်မှ အကျင့် မှန်မယ်တဲ့ ဒါက
တော့ ယောဆရာတော် ဆုံးမတဲ့ စကားလေးပါ....ပစ္စည်းတခု ဝယ်ရင်တောင် ရွေးဝယ်ကြရပါတယ် သံသ
ရာရဲ့ထွက်လမ်းဆိုတော့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်...ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ ကိုက်မဲ့ ဆရာကို ရှာပြီးအမြန်ကျင့်ဘို့ လိုပါ
တယ် ဘာကြောင့်လဲးဆိုတော့ သူ့ ဆရာ သူ့ ဒကာဆိုတာ ရှိပါတယ်..ဆရာရွေးမမှား ဘို့ အရေးကြီးပါ
တယ်..ကိုသန်ရာ သန်ရာ ကို ရှု့ကြရမှာပါ .တချက်လွဲးရင် တောက်ရှောက် လွဲးဘဲး...ဒီခေတ်ကြီးထဲး
မှာဆရာ အစုံ ရှိပါတယ်.ရှု့ နည်းမျိုးစုံ လဲးရှိ ပါတယ်...သံဝေဂ ရှိရပါမယ်.ဒိဠိ ခွါရပါမယ် ဒါဆိုရင် အား
ကောင်းသော ဝိပသနာ ဖြစ်ပါပြီ
လှိုင်ကျော်ထွေး သည် နိုဝင်ဘာ 24, 2011 က 7:36pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
၀ိပဿနာရှုမှတ်တာကနောက်--ဒိဌိအရင် ဥာတပရိညာအားဖြင့် အရင်ခွါရမည်။(မိုးကုတ် ဆရာတော်ဘုရား)
Ashinkhemeinda သည် နိုဝင်ဘာ 24, 2011 က 2:17pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
သီတဂူပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ ပြောတဲ့စကားလေးပါ။
(၀ိပဿနာအားထုတ်လိုက်ခြင်းက ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး..။
ပြဿနာတွေပေါ်ထားတဲ့ မိမိရဲ့စိတ်ကို ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာပါ...။)
၀ိပဿနာအားထုတ်ခြင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခွဲပြလိုက်တဲ့ ဟောကြားချက်ပါ။
ဒါ့ကြောင့် ကိလေသာအလွန်ဖြစ်လွယ်တဲ့ ကနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ကလေးကစပြီး သေဆုံးခါနီးလူတွေတိုင်အောင် တရားကို အားထုတ်သင့်ပါတယ်..။
hla moe 24 သည် နိုဝင်ဘာ 18, 2011 က 11:01amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
စွန်းလွန်း နည်းလေးများ ရှိရင် မျဝေပေး ကြပါခင်ဗျာ.....
အားလုံးကို ရိုသေလေး စားစွာဖြင့်
hla moe 24 သည် နိုဝင်ဘာ 16, 2011 က 2:35pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
တင်အေးနိုင် သည် နိုဝင်ဘာ 15, 2011 က 9:26pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
နီစံ (အနီ) သည် နိုဝင်ဘာ 15, 2011 က 7:38amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
Discussion Forum ရဲ့ အောက်နားမှာ Add Discussion ဆိုတာကို click လိုက်ရင် ဆွေးနွေးမှုေ၇းဖို့ စာမျက်နှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ကိုလှမိုး အဆင်ပြေပါစေနော်